पत्रपत्रिका खवर Archives - Page2of 143 - SangaloKhabar
काठमाडौं । डा. युवराज खतिवडाको मन्त्री कार्यकाल सकिएपछि संविधानबमोजिम उनलाई पुनः सोही पदमा ल्याउन संविधान बाधक हुने भएको छ । संसद्को दुवै सदनको सदस्य नभएको व्यक्ति नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, त्यसरी मन्त्री भएको व्यक्तिले पदलाई निरन्तरता राख्न ६ महिनाभित्र कुनै सदनको सदस्य भइसक्नुपर्ने प्रावधान धारा ...
कक्षा १२ को परीक्षा दशैं अगाडि नै हुने
मंगलबार, भाद्र १६, २०७७
काठमाडौं । कक्षा १२ को परीक्षामा जुटेका विद्यार्थीलाई छिट्टै नै उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने बाटो खुला हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ का विद्यार्थीको स्थगित परीक्षाको निकास दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएपछि विद्यार्थीको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने बाटो खुल्ने भएको हो । बोर्डका (कक्षा ११ र १२ हेर्ने) परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी स...
आजबाट अन्तर्राष्ट्रिय नियमित व्यावसायिक उडान
काठमाडौं । लामो समयको प्रतीक्षा एवं चौतर्फी दबाबपछि बल्ल मंगलबार (आज)देखि अन्तर्राष्ट्रिय नियमित व्यावसायिक उडान सुरु हुने भएको छ । आन्तरिकतर्फका उडानलाई भने आगामी भदौ मसान्तसम्म रोक्ने निर्णय गरेको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नियमित व्यावसायिक उडानसँगै चार्टर उद्धार उडानलाई पनि निरन्तरता दिनेछ । सरकारले विभिन्न ८ देशमाथि गत चैतदेखि लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रतिबन्ध खुला गर्दै नियमित व्याव...
निषेधाज्ञामा झन् बढ्यो संक्रमण
काठमाडौं । काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिए पनि कोरोना संक्रमण झन्झन् बढ्दो छ। पछिल्लो २४ घण्टामा आइतबार १ हजार २ सय २१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै भदौ ३ गते राति लगाइएको निषेधाज्ञाबीच आइतबार सर्वाधिक ४ सय २९ जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले काठमाडौंमा ३ सय ७२, भक्तपुरमा ४५ र ललितपुरमा १२ जनामा ...
नेपालमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै
आइतबार, भाद्र १४, २०७७
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयको सर्वेक्षणले मुलुकमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या दिनदिनै बढ्दो क्रममा रहेको देखाएको छ ।गृह मन्त्रालयले केन्द्रीय तथ्यांक विभागसँगको सहकार्यमा गरेको सर्वेक्षणले २०६९ बाट २०७६ सम्मको सात वर्षे अवधिमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढेको र विगतमा भन्दा औसत वृद्धिदर घटेको देखाएको हो । तथ्यांकअनुसार नेपालमा दैनिक १५ जनाका दरले लागूऔषधका प्रयोगकर्ता थपिने गरेका छन् । प्रयोगकर्...
कुटनीतिक नियोगको घर भाडामै बाहिरियो साढे ३ अर्ब
शनिबार, भाद्र १३, २०७७
काठमाडौं । सरकारले बिभिन्न मुलुकमा स्थापना गरेको राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगको घरभाडा तिर्नमा मात्रै अरबौ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । ती स्थानमा समयमै आफ्नो भवन बनाउँन नसक्दा राज्यकोषबाट बार्षिक अरबौं रुपैयाँ घरभाडामा मै खर्चनुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय स्थानमा त बर्षौं अघिदेखि नै जग्गा किनेर राखिएपनि भवन बन्न सकेको छैन । जसका कारण जग्गा वेवारिसे जस्तै बन्न पुगेको छ । खरिद गरिएको जग्गामा भवन बना...
नेताले नै तिरेनन् सेनाको विमान चार्टरको रकम
काठमाडौं । नेपाली सेनाको बिमान चार्टर गरेबापत राजनीतिक व्यक्ति र संस्थाले गरी सेनालाई तिर्नुपर्ने रकम बिगत ३५ बर्षदेखि बाँकी रहेको पाईएको छ । सेनाको बिमान उधारोमै भाडामा लिएर भाडाबापतको रकम नतिर्नेमा उच्च राजनीतिक व्यक्तिदेखि बिभिन्न संस्थासम्म छन् । उच्च राजनीतिक व्यक्तिले प्राकृतिक प्रकोपका घटनाको भ्रमणमा पटक–पटक बिमान लगेका छन् भने संघसस्थाले सामान ओसारप्रसारका लागि बिमान प्रयोग गरेका छन् । ...
नेपाल आउन सर्तै सर्त, नियमित तथा चार्टर उडानको तालिका तय
काठमाडौं । सरकारले आगामी १६ भदौबाट हुने भनिएको नियमित तथा चार्टर उडानको तालिका बनाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तालिका बनाएर स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पठाएको छ । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेसँगै सञ्चालन गर्न लागेको हवाई उडानका लागि थुप्रै सर्त राखिएका छन् । मन्त्रालयले विभिन्न ८ देशमाथि...
राजस्व संकलन उत्साहजनक: ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ संकलन
काठमाडौं । विश्व महामारीका रूपमा संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमै अवरोध पु-याएको अवस्थामा राजस्व संकलन उत्साहजनक देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को दोस्रो महिनाको ८ भदौसम्म ६७ अर्ब १९ करोड २० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जसमा कर राजस्वबापत ६४ अर्ब ८२ करोड ७० लाख रुपैयाँ उठेको छ । यसैगरी, गैरकर राजस्वबापत २ अर्ब ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँ उठेको छ । ...
कोरोना संक्रमितको मृत्युदर ह्वात्तै बढ्यो, एक महिनामै ११४ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएकाहरूको मृत्यु हुने दर ह्वात्तै बढेको छ । गत ८ साउनसम्म ४३ जनाको मृत्यु भएकामा सोमबारसम्म मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ५७ पुगेको छ । एक महिनामै १ सय १४ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो । गत ८ जेठसम्म तीन जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकामा ८ असारमा बढेर २२ पुगेको थियो । पछिल्ला आठ दिनमा थप ५० संक्रमितको मृत्यु भएको छ । केही दिनयता लक्षणसहितका संक्रमित...